Enye yemisebenzi ephambili yabazali kunye nabasebenzi bamaziko angamaziko asemasifundweni kukudala izimo ezifanelekileyo zokuphucula ngokomzimba umzimba. Ukuqonda le njongo, kuyimfuneko ukuphuhlisa nokuqinisa impilo yengqondo yabantwana.
Nsuku zonke, abantwana bafuna ukwenza into entsha, inomdla. Izenzo zokuzivocavoca ngokwemveli azihlali zifana neentsana. Yaye apho kukhangeleka kakhulu ukunxibelelana nabantwana abakhutheleyo, abo banomdla wokuzivocavoca kunye nokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa ngexesha elinye.
I-Gymnastics inceda ukulungiselela umntwana esikolweni. I-gymnastics ephosakeleyo iphakamisa isimo sengqondo sabantwana, i-amuses kwaye iyabakholisa.
I-gymnastics yolonwabo yabantwana ikhula kubantwana kunye nezakhono zokwenza imidlalo yemidlalo kwifom yezemidlalo.
Abantwana banamandla angenamkhawulo, ngoko ke unokwenene usebenzise iindlela zokuzonwabisa zabantwana abaselula.
Uvuyo lwe-gymnastics ukususela ekuzalweni
I-Gymnastics nomntwana ingaqwalaselwa kwiinyanga zokuqala zobomi. Ukuzonwabisa, umdlalo othakazelisayo wezingane uya kwenza ukomeleze impilo yomntwana ngoncedo lokudlala.
Imidlalo yokuzonwabisa yangaphandle, imizimba yeminwe kunye nezenzo zithwala kude ncinane. Ukuzivocavoca ngohlobo lomdlalo kuyamnandi kwaye kuyamnandi abantwana. Umama unokufumana ixesha elikhulu ukuthetha nomntwana, ukuphuhlisa nokukhupha umzimba.
Ngombulelo kumdlalo omnandi kumntwana ufumana ukubonakala okutsha kwaye uqhotyoshelwe ukugxila kunye nokunyamekela. Ngendlela yokuzonwabisa yokuzonwabisa emnandi, umntwana ukhulisa izakhono zonxibelelwano nabantu abadala kunye nabanye abantwana. Sebenzisa ngexesha leemfundo ezimnandi umculo nomculo wezingane. Oku kuncedisa ekuphuhliseni ukunambitheka kwe-aesthetic kumntwana ukususela kwiminyaka emncinci.
I-gymnastics ekhangayo yabantwana
Umama ngamnye, ekwazi umntanakhe, kufuneka abe ngabanye ngokufunda imfundo yakhe. Ngokuqhelekileyo akulula ukufumana umntwana wakho ukuba asebenzise, ​​kodwa efomeni yomdlalo omnandi, lo msebenzi unokuzenzekelayo.
Enye yeentlobo ze-gymnastics ezithakazelisayo yi-gymnastics emehlweni omntwana.
Sebenzisa le mizila emnandi ukukhohlisa umntwana ukuba enze ukuzivocavoca.
Sivula amehlo ethu kwaye senza iziqhelo.
Siyaxuba kanye, kabini, bathathu
Kwaye sibheke emacaleni.
Siphakamisa amehlo ethu phezulu, sithungela ilanga,
Emva koko sibheka umtshini, sothuzela kumama.
Amehlo abukela phantsi emilenzeni,
Kwaye macala kwakhona.
Siza kujonga ngakwesobunxele - ukuya kunene,
kwakhona kwakhona kumama.
Kwaye ngoku siya kuvala amehlo
Akukho nto yokucima!
Vula amehlo avulekileyo, ukuhleka, ukumomotheka
Qalisa usuku lwakho olutsha ngokuvuya, ujabule!
Ukuzivocavoca okunjalo kuya kunceda ukuphelisa ukuxhatshazwa, ukuqinisa imisipha yamehlo. Umntwana uya kuvuyela ngokukhawuleza evela kwisibhedlele kwaye kungekho naluphi na iingxaki eziya ku-nursergarten.
Ukudansa kuyindlela ephumelelayo yokufumana abantwana benze izinto ezahlukeneyo. Vele uvule umculo wakho omnandi oyintandokazi kwaye uqale ukudansa naye. Umdlalo womdaniso we-dance gymnastics uvelisa umvo weengqungquthela kwaye awuthatheli umntwana. Uyenza ngokuvuya kunye nomdla. Abantwana bafunda ukuba bangabi neentloni okanye bakhuphe ngexesha loqeqesho. Ukongeza, baya kulonwaba, kuba bakubonayo udansa kufuphi nawe. Yenza rhoqo kunye nabantwana bakho ukuzonwabisa ngomdaniso ngeveki, ukuguqula umculo kunye nokukhetha ixesha ngalinye. I-gymnastics ehlekisayo yabantwana ekudaneni kukuxhulumana ngokuzonwabisa kwabazali kunye nosana lwabo, inkokhelo ye-vivacity namandla.
Bonke abantwana bathanda ukudlala, ngoko kutheni ungabandakanyi ukuzivocavoca kumdlalo? Ubuqhetseba kukufumana iifom zokuzilolonga ezifanayo kunye nokuqinisa umzimba wonke womntwana. Ngokomzekelo, iiklasi emanzini aziphuculanga kuphela impilo, kodwa ziyancokola. Abantwana abaselula bayathanda izandi ezingaqhelekanga. Unokukufanekisa umfanekiso wesitrato okanye wenze amaza. Oku kusebenza kumanzi kunzima umntwana wakho kwaye kumncedise ngexesha elifanayo.
Umdlalo omnandi kumdlalo ubaluleke kakhulu ekuphuhlisweni kwezingane. Ingaba umntwana unokugcina umlinganiselo? Ukulinganisela kuyindlela ephakamileyo yokuphuhlisa izakhono zamashishini. Zama ukumfundisa indlela yokugxuma njengekhanaroo. Lo msebenzi owonwabisayo ukhuthaza ukukhula ngokomzimba kwaye uqinisa imisipha.
Ukuphuhliswa kwengqondo yomntwana kwasebuncinaneni
Indlela yokufundisa umntwana ukuthetha ngokuchanekileyo nenja
Amaholide kunye nomntwana: iingcebiso ezifanelekileyo
Ngaba umntwana udinga ifowuni?
Umntwana unokusinda njani umtshato womzali?
Indlela yokugcina umlo njengoko kunjalo
Iipancakes kunye nokuzaliswa kwepayipi
Ibali elenzeke kum
I-Cupcake kunye neerinki kunye nama-walnuts
Indlela yokuxiliswa kwamanzi e-lymphatic